काठमाडौँ। विषाक्त मदिरा सेवनका कारण मलेसियामा थप एक नेपालीको मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा देउराली–८ नवलपरासीका दुर्गासिंह राना रहेको क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । यससँगै मलेसियाको सेलाङ्गोर राज्य र क्वालालम्पुर क्षेत्रमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट मृत्यु हुने नेपालीको सङ्ख्या सात पुगेको छ ।
विषाक्त मदिरा सेवनबाट बसेरी धादिङका मीमबहादुर घले, मसिना रुपन्देहीका रामकुमार यादव, अमरगढी डडेल्धुराका विशाल बुढाथोकी, पश्चिमकुसाहा सुनसरीका सञ्जय उराव, सिद्धिथुम्का इलामका बलबहादुर कुलुङ्ग र पथ्थरकोट सर्लाहीका आइतसिंह गोलेको मृत्यु भएको दूतावासले जनाएको छ ।
मृतकको शव मलेसियाका विभिन्न अस्पतालमा राखिएको छ ।
विषाक्त मदिरा सेवनबाट १७ जना गम्भीर बिरामी परेका थिए । उनीहरुमध्ये १२ को क्वालालम्पुरस्थित विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने पाँच जना उपचारपश्चात घर फर्किसकेका छन् । सिद्धकाली सङ्खुवासभाका लुङ्गनाथ मगर, रानीचुरी सिन्धुलीका जीतबहादुर माझी, मैनापोखर बर्दियाका प्रवीन थारु, महेन्द्रनगर सुनसरीका दुर्गाबहादुर राई र राङ्सी रोल्पाका भागीमान डाँगी उपचारपश्चात कम्पनीमा फर्किसकेका छन् ।
दूतावासका अनुसार रघुनाथपुर बाराका राधेश्याम बैठा, फरेना रुपन्देहीका रामचन्द्र लोध, च्याङ्ली गोरखाका लोकबहादुर बराम, चोकामागु पाँचथरका सेतवीर तुम्बाप्तो, बाबियाविर्ता, मोरङका जम्बिरलाला झाँगड, सुङ्देल, खोटाङका चम्पावति राई, धुलिखेल काभ्रेपलाञ्चोकका चन्द्रसिं तामाङ, ढुङ्ग्रेखोला सर्लाहीका रिकामान स्याङ्ताङ, ठेगाना नखुलेकी सकुवल घिसिङ, राजेशकुमार हजारी, बिमल कार्की र दातेबहादुर सारु मगरको स्थानीय विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
मलेसियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा विषाक्त मादक पदार्थ सेवनको अवस्थामा टाउको दुख्ने, बान्ता हुने, पखला लाग्ने, आँखा धमिलो हुने, पेट दुख्ने, रिङ्गाटा लाग्ने र छिटोछिटो श्वासप्रश्वास बढ्ने जस्ता लक्षण देखिने जानकारी गराएको दूतावासले जनाएको छ । दूतावासले यस्ता लक्षण विषाक्त मदिरा सेवन गरेको २४ देखि ४८ घन्टापछि मात्र देखिन सक्ने हुँदा लक्षण देखिने बित्तिकै नजिकको अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा जान सूचित गरेको छ ।
मलेसियाको रोजगार सम्बन्धमा संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता
काठमाडौँ । मलेसियाको रोजगार नखोलेको भन्दै संसद सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा.डिला संग्रौला प्रस्तावक रहेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको हो
मलेसियाको रोजगार खुलाउन सरकार उदासिन - डा. संग्रौला
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा आजदेखि आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटका नीतिगत, वस्तुगत र सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल शुरु भएको छ । यही जेठ १५ गते संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०७६-७७
किने खुलेन मलेसिया ? सय अर्बको प्रत्यक्ष नोक्सानीको दोषी को ?
काठमाडौँ । अघिल्लो जेठ २ गतेदेखि रोक्काभएको श्रमका लागि मलेशियाको गन्तव्य यो जेठमा पनि खुल्ने संकेत देखिएन । यो श्रमबजार रोकिँदा यो एकवर्षमा करिव डेढलाख (१ लाख ४० हजार) श्रमिक
मैत्रीपूर्ण खेलमा मलेसियासँग नेपाल पराजित
काठमाडौं । मलेसियासँगको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल २-० गोल अन्तरले पराजित भएको छ । गएराती सम्पन्न खेलमा नेपाल मलेसियासँग पराजित भएको हो । खेलको पहिलो हाफमा गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा मलेसियाले